Ikhonjwa indlela imeya yeTheku
IMeya yeTheku uNkk Zandile Gumede okuvela ukuthi sesithathiwe isinqumo sokumhoxisa kulesi sikhundla. Isithombe: African News Agency (ANA) Archives.
NONTUTHUKO NGUBANE | August 13, 2019
IMEYA yaseMsunduzi uMnuz Themba Njilo okuvele imibiko izolo ebusuku yokuthi umhlangano wesigungu esiphezulu se-ANC KwaZulu-Natal unqume ukuthi ikhonjwe indlela ithi ayinayo inkinga yokuthi isuswe yinhlangano ngoba iyona eyamjuba.
Ngesikhathi sokuloba izolo kuvele izindaba zokuthi uNjilo noNkk Zandile Gumede kunqunywe ukuthi bakhonjwe indlela. Imithombo yeSolezwe, ecele ukungavezwa, ithe umhlangano unqume ukuthi bakhonjwe indlela.
Umthombo wokuqala uthe i-ANC inqume ukuthi bakhonjwe indlela yize siye koloba izolo ebusuku umhlangano usaqhubeka.
“Isinqumo siphumile ukuthi bakhonjwe indlela,” kusho umthombo.
Omunye umthombo osondelene noNkk Gumede uthe kuthiwa imiphumela ayimihle ethinta indaba kaNkk Gumede.
“Kukhona abathe kungenzeka axoshwe noma aphinde alulelwe isikhathi sekhefu. Sizilinda into ebambekayo ukuze sizwe ukuthi kugcinaphi ngoba i-ANC iyona ejuba abantu futhi iphinde ikuhoxise,” kusho umthombo.
Kuthintwa uNjilo izolo ebusuku uthe:“ Bengingakatholi kwi-ANC ukuthi isiyangikhulula. Uma kwenzeka isingisusa esikhundleni sokuba yiMeya ngeke ngibe nenkinga ngoba yiyo engithumile. Noma sengisusiwe kwesemeya ngiyoqhubeka ngisebenzele i-ANC njengoba kade ngenza,” kusho uNjilo.
UNjilo uthe uzolinda i-ANC ukuba imbikele ngesinqumo sayo.
NgoLwesine uNkk Gumede kade evele eNkantolo yaseThekwini ngmacala athinta imali ekuthiwa yakhwatshaniswa kumasipala.
Icala lihlehlele unyaka ozayo.
Umasipala waseMsunduzi wafakwa ngaphansi komlawuli ngenxa yezinkinga.
Imizamo yokuthola okhulumela i-ANC uMnuz Ricardo Mthembu ayiphumelelanga.